Maxaad Ka Taqaan Nafaqada Iyo Caafimaadka Ku Jira Koostada? - Daryeel Magazine
Maxaad Ka Taqaan Nafaqada Iyo Caafimaadka Ku Jira Koostada?
Koostadu waa caleen cagaaran oo aad looga isticmaalaa meelo badan oo dunida ka mid ah, waxaa afka english-ka lagu yiraahdaa Spinach siyaabo kala duwan ayaa loo isticmaalaa sida in cunto ahaan loo karsado ama cabbitaan loo shiito.
Koostada waa khudaar ay ka buuxaan maadooyin jirka waxtar u leh waxaana ka mid ah Niacin, Zinc, Protein, Vitamin A, C, E, K, Thiamin, vitamin B6, B2, manganese, Birta (iron), Magnesium, Potassium, Copper iyo calcium.
Koostada waxaa aad ugu badan maadada jirka sunta ka saarto ee loo yaqaan Antioxidants, waxaa kaloo ku jiro maadada Folate taasoo la rumaysay yahay in ay faa’iido caafimaad u leedahay wadnaha iyo xididada.
Maadada magnesium ee laga helo koostada waxay ka qeyb qaadataa kantaroolidda cadaadiska dhigga.
Koostada waxaa kaloo ku badan maadooyin la dhaho beta-carotene, lutein iyo xanthen oo indhaha faaido ugu jirto kuwaas oo siyaadiyo awoodda aragga.
Cilmbi baaris dhowaan la sameeyay ayaa lagu sheegay in koostadu in koostada ay kobciso xasuusta, shaqada maskaxda iyo foojignaanta.
Nafaqada muhiimka ah ee koostada ku jirta sida Vitamin B, C, E, potassium, magnesium, iron, calcium iyo omega3 waxay u fiican yihiin caafimaadka timaha. Tusaale ahaan birtu (iron) waxa ay caawisaa in ogsajiinta dhiiggu ay gaarto timaha, isku darna waxa ay maaddooyinkani timaha u soo celiyaan quruxda, iyo bixitaanka dabiiciga ah.
Ugu Dambeyntii koostadu waxay u wanaagsan tahay dheefshiidka, waxay ka hortagtaa calool fadhiga, waxay kaloo u roontahay dadka qaba gaaska.
Maxaad Ka Taqaan Lawska Walnut Iyo Caafimaadka Ku Jira Nafaqada Iyo Caafimaadka Baamiyaha Maxaad Ka Taqaan Waxtarka Iyo Khasaaraha Midhaha Flax seed (Qoondarka)? Nafaqada Iyo Caafimaadka Laga Helo Cabista Caanaha Geela
6 important foods to eat during pregnancy
Now that you’re pregnant, you’re not only thinking about your health but also the health …